Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » I-NASA ibonelela ngokuBamba ngokuPhila kweRussian Cosmonauts Spacewalk
Ii-cosmonauts ezimbini zaseRashiya ziya kungena ngaphandle kweSikhululo saMajukujuku saMazwe ngaMazwe malunga ne-7 am EST ngoLwesithathu, ngo-Jan. 19, ukuqhuba uhambo lwasemajukujukwini ukulungiselela imodyuli entsha ye-Prichal ye-Russian ezayo i-spacecraft yokutyelela.
Inkcazo ephilayo yohambo lwasemkhathini iya kuqala ngentsimbi yesi-6 kusasa kumabonwakude weNASA, usetyenziso lweNASA, kunye newebhusayithi yearhente.
I-Expedition 66 Commander u-Anton Shkaplerov kunye neNjineli yeFlight uPyotr Dubrov waseRoscosmos baya kuqalisa uhambo olucwangcisiweyo lweeyure ezisixhenxe ngokuphuma kwimodyuli yePoisk kwicala elijonge emajukujukwini yecandelo lesitishi laseRashiya. Ngexesha lokuhamba emajukujukwini, i-cosmonauts iya kufaka i-handrails, i-eriyali ye-rendezvous, ikhamera ye-TV, kunye neethagethi ze-docking kwi-Prichal, eziye zangena ngokuzenzekelayo kwimodyuli yelebhu yeNauka ngoNovemba.
Isiphekepheke se-Soyuz esithwele ii-cosmonauts ezintathu, eziya kuba yinxalenye ye-Expedition 67 crew, sisiqalo sokuqala esicwangcisiweyo sokumisa i-Prichal, esicwangciselwe uMatshi.
I-Shkaplerov iya kusebenza njengelungu le-extravehicular crew 1 (EV1) kwaye iya kunxiba i-spacesuit yaseRashiya ye-Orlan enemizila ebomvu. UDubrov uya kunxiba i-spacesuit enemigca eluhlaza njengelungu le-extravehicular crew 2 (EV2). Oku kuya kuba yindawo yesithathu yokuhamba ngesithuba kwi-career ye-Shkaplerov kunye neyesine kwi-Dubrov. Uhambo lokuqala lwasemajukujukwini ngo-2022 nalo luya kuba yi-246th spacewalk ukulungiselela ukudibanisa isikhululo sasemajukujukwini, ukugcinwa nokuphuculwa.
Uhambo lwasemajukujukwini olongezelelweyo lucwangciswe kule ntlakohlaza ukunxibisa ingalo yerobhothi yaseYurophu kwilabhoratri yaseNauka kunye nokuvula isitshixo somoya saseNauka ukwenzela umsebenzi wokuhamba emajukujukwini kwixesha elizayo.
Oku ngakumbi: NASA
Idatha entsha kuNyango lwe-Alzheimer's Disease
Isibheno se-SKAL International kwiZiphumo eziNtsha...
IFIFA kunye ne-UEFA zikhabela ngaphandle onke amaqela ebhola ekhatywayo aseRashiya
Iziphumo ezitsha kwizigulana zoMhlaza wamabele abaphethwe yi...
Ungazifumana njani iiBahamas njengeDuke kunye ...
IPan Cancer Esekwe Egazini Kwangethuba...